Tsipika famokarana zezika voajanahary vita amin'ny vovoka - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny zezika biolojika vovoka dia matetika ampiasaina hanatsarana ny tany sy hanome otrikaina ho an'ny fitomboan'ny vokatra. Izy ireo koa dia mety ho lo haingana rehefa miditra amin'ny tany izy ireo, mamoaka haingana ireo otrikaina. Satria ny zezika biolojika matanjaka vovoka dia voadona amin'ny taha miadana kokoa, ny zezika vovo-vovoka dia voatahiry lava kokoa noho ny zezika biolojika ranoka. Ny fampiasana zezika biolojika dia nampihena be ny fahasimban'ny zavamaniry sy ny tontolon'ny tany.
Manome zezika voajanahary amin'ny tany ny zezika biolojika, noho izany manome ny zavamaniry ny otrikaina ilain'izy ireo hananganana rafitry ny tany salama fa tsy handrava azy ireo. Ny zezika biolojika dia mirakitra fahafaha-manao asa goavana Miaraka amin'ny famerana tsikelikely sy ny fandrarana ny fampiasana zezika any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy ny sampana mifandraika amin'izany, ny famokarana zezika biolojika dia ho fotoana lehibe ho an'ny orinasa.
Ny akora biolojika rehetra dia azo zahana ho lasa zezika organika. Raha ny marina dia potipotehina sy asava ny zezika mba ho lasa zezika vovoka vita amin'ny vovoka avo lenta.
2, fako indostrialy: voaloboka, vinaingitra vinaingitra, residin'ny mangahazo, reside siramamy, fako biogas, sisa tavela amin'ny volony, sns.
4. Fako ao an-trano: fako ao an-dakozia.
Ny dingana ilaina mba hamokarana zezika biolojika vovoka toy ny vovoka neem mofo, vovoka poaha kakao, vovoka akorandriaka, vovoka tain'omby maina, sns. Dia misy akora vita amin'ny composting tanteraka, fanorotoroana ny zezika vokatr'izany ary avy eo fizahana sy famonosana azy ireo.
Ny tsipika famokarana zezika biolojika vovoka dia manana teknolojia tsotra, vola kely amin'ny fampanjariam-bola ary asa tsotra.
Manome fanampiana ara-teknika matihanina izahay, manomana araka ny filan'ny mpanjifa, sary an-tsary, sosokevitra fananganana eo an-toerana, sns.
Dingana famokarana zezika biolojika vita amin'ny vovoka: compost - crushing - sieve - fonosana.
Ireo akora voajanahary dia tanterahina matetika amin'ny alàlan'ny dumper. Misy fari-pitsipika maro izay misy fiantraikany amin'ny zezika, izany hoe ny haben'ny sombiny, ny tahan'ny karbaona-nitrônina, ny atin'ny rano, ny atin'ny ôksizena ary ny mari-pana. Tokony homena ny saina:
1. Kitiho ho potika kely ilay fitaovana;
2. Ny tahan'ny karbaona-azota amin'ny 25-30: 1 no fepetra tsara indrindra amin'ny zezika mahomby. Arakaraka ny habetsaky ny fitaovana miditra, ny lehibe kokoa ny mety hisian'ny decomposition mahomby dia ny fitazonana ny tahan'ny C: N mety;
3. Ny hamandoana tsara indrindra amin'ny akora simika compost dia mazàna eo amin'ny 50% ka hatramin'ny 60%, ary ny Ph dia fehezin'ny 5.0-8.5;
4. Ny horonan-taratasy dia hamoaka ny hafanan'ny antontam-bokin'ny zezika. Rehefa simba amin'ny fomba mahomby ny fitaovana dia mihena kely ny maripana miaraka amin'ny fizotra mihodina, ary avy eo miverina amin'ny ambaratonga teo aloha tao anatin'ny roa na telo ora. Ity dia iray amin'ireo tombony lehibe ananan'ny dumper.
Ny grinder mitsangana mitsangana no ampiasaina hanapotehana ny zezika. Amin'ny alàlan'ny fanorotoroana na fikosoham-bary, dia azo esorina ireo akana bitika ao anaty compost mba hisorohana ny olana amin'ny famonosana ary hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny zezika organika
Ny milina sivana dia tsy manala ny loto ihany, fa mifantina ihany koa ireo vokatra tsy mendrika, ary mampita ny zezika amin'ilay milina sivana amin'ny alàlan'ny mpampita fehikibo. Ity fizotry ny fizotrany ity dia mety amin'ny milina siève amponga misy lavaka sivana kely antonony. Ilaina ny fitahirizana amin'ny fitehirizana, fivarotana ary fampiharana ny zezika. Ny sieving dia manatsara ny firafitry ny zezika, manatsara ny kalitaon'ny zezika, ary mahasoa kokoa amin'ny fonosana sy fitaterana manaraka.
Ny zezika voasivana dia hoentina any amin'ny masinina fonosana mba hanaovana varotra ny zezika vovoka vovoka izay azo amidy mivantana amin'ny alàlan'ny fandanjana, mazàna amin'ny 25 kg isan-kitapo na 50 kg isaky ny kitapo ho lasa fonosana iray.